Promo Archives - YTV
YTV Channel ပရိသတ်တွေထဲမှာ စုံထောက်ပညာဝါသနာပါသူတွေများ ရှိကြပါသလား?… တကယ်လို့များ စုံထောက်ပညာဝါသနာပါတယ်. မှုခင်းတစ်ခုမှာ တရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာကို စူးစမ်းကြည့်ချင်မိတယ် ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ Who’s the murderer Variety Show ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဉာဏ်စမ်းကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာ […]
? ဟာသကိုမှ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲလေး ကြည့်ချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးနေမြဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YTV Free To Air Channel ကနေ အခုတစ်ခါမှာတော့ ပေတူးရဲ့ အလွဲလေးတွေကို ဆောင်ယူလာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်. ?‍♂ ပေတူးဆိုတဲ့ […]
Make if YourSelf
လက်မှုပညာတွေကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ အလှပစ္စည်းလေးတွေကို လက်ဆောင်ပေးချင်သူတွေ အတွက် “Make It Yourself”အစီအစဉ်လေးကို ထုတ်လွှင့်ပြသပေးလိုက်ပါတယ် ဒီအစီအစဉ်လေးမှာတော့ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းအများစုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ် လက်မှုအနုပညာလေးတွေအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…ဒါ့အပြင် ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးပြုလုပ်ချင်ရင်လည်း ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ အသေးစိတ်ပြသပေးထားတာမို့ အကြိုက်တွေ့စေမှာအသေအချာပါပဲ… […]
YTV Free to Air Channel မိသားစုများ စုပေါင်းအားဖြည့်ဖန်တီးထားကြတဲ့ “Beautiful Myanmar Documentary Film ” ရဲ့ Theme Song ကို နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel တွင်ယနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ […]
July 24, 2020 4:32 am
ဒီအစီအစဉ်လေးမှာတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး သူတို့ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်… အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံရသလို ခံစားချက်မျိုးကို ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ YTV Free to Air Channel ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Cover Star အစီအစဉ်ကို […]
ဂီတဆိုတာခံစားမှုရှိတဲ့သူတွေအတွက် အရေးအပါဆုံးအနုပညာတစ်ခုပါ၊ သို့သော်လည်း ဖန်တီးသူများအတွက် ခံစားချက်တွေသာမက ကြိုးစားမှု ၊ ကျရှုံးမှုနဲ့ အခက်အခဲတွေများစွာရှိကြပါတယ်…ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားကနေ ဂီတမျိုးစိတ်သစ်တွေနဲ့ အတူ ဝါသနာနဲ့လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ဘဝဖြတ်သန်းပုံတွေ ကိုပါ ပရိတ်သတ်ကြီးတို့အတွက် တင်ဆက်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် … သည်အစီအစဉ်လေးကိုတော့ […]